Indlu yeBay Top Lake House ephangaleleyo eLakeshore
Wamkelekile kwi-Bay Top Lake House e-Bayfield Wisconsin, indawo eyonwabisayo neyokuphumla eyi-3,200 sq ft erentwayo kwikhaya leholide ebekwe malunga neemayile ezi-1 kuMntla weBayfield entle engaphezulu kwe-300 ft yonxweme enedesika enkulu kunxweme olubukekayo lweLake Superior. Ubomi bumnandi xa uhlala kwiBay Top Lake House!
Xa ungena kweli khaya likhulu leeholide uya kuqala uthathwe xa ubona i-octagon enkulu enemilo yegumbi lokuhlala eliphambili elineembono ezimangalisayo zeLake Superior, indawo yomlilo yamatye enkulu, indawo yepiyano, kunye nezitulo ezitofotofo ukuze uhlale kwaye ujonge. ichibi. Ngaphandle nje kwegumbi lokuhlala eliphambili uya kwamkelwa kuzo zombini ikhitshi eliphangaleleyo kunye negumbi lokutyela okanye ungaphuma kwi-1,200 sq ft deck ukuze ubambe ukuphuma kwelanga kwaye uphumle.
Eli khaya likhathalelwe kakuhle ngeholide liqulathe umgangatho wokuqala wemaster suite enebhedi yokumkani ebonisa iimbono zeLake Superior kunye neZiqithi zePostile kunye negumbi lokuhlambela leen-suite. Igumbi lokuhlambela elikhulu ligqibezela igumbi lokulala elikhulu. Kukho igumbi lokulala le-2 elinebhedi yokumkanikazi eneembono zechibi elibekwe kumgangatho osezantsi wokuphuma kwindawo engaphantsi kwekhaya. Igumbi lokuhlambela lesibini elineshawa yeethayile lifumaneka ngaphandle kwegumbi lokulala le-2. Indawo yokulala yesithathu eneebhedi ezi-2 zikwathanda iimbono zeLake Superior.
Inqanaba le-2 lokuhamba kwindawo engaphantsi liphupha labosonwabisa njengoko linembono yeLake Superior. Lonwabele ixesha uhleli phambi kwendawo yesi-2 enkulu yezitena okanye kwiholo yequla lokudlala ipiyano okanye umdlalo wephuli. Inqanaba le-2 likwabamba ikhitshi elongezelelweyo kunye negumbi leTV elahlukileyo elinesofa yokukhupha.
Ukuhlala ebusika kuya kufuna isithuthi esinamavili ama-4 njengoko indlela yethu yokuqhuba inethambeka kwaye ikhephu alisuswa yonke imihla.
Zulazula kumhlaba weehektare ezi-3+ kwaye wonwabele ubuhle bendalo bechibi, umthi oqinileyo kunye nemithi ehlala iluhlaza kunye nokubonwa ngamaxesha athile kwindawo yasendle yaseBayfield. Yonwabela indawo enoxolo yeLake Superior ukubaleka kwimizuzu nje ukusuka kwindawo enomtsalane, iivenkile kunye neeresityu kumbindi wedolophu yaseBayfield, WI.
Yonke intlawulo yokucoca iya ngqo kumcoci. Umcoci wethu uthatha ixesha lakhe ukuqinisekisa ukuba ikhaya licocekile xa ufika kwaye wenza umvuzo onokuwufumana.
Ifumaneka kumantla akude eWisconsin, iBayfield, iWI lisango leApostile Islands National Lakeshore. Sifumaneka kufutshane neefama zequnube kunye namabhoma (Fruit Loop) kunye nomgama wokuhamba ukuya edolophini, kodwa kwindlela ezolileyo enamakhaya ambalwa onxweme lwechibi. IChicago Tribune yakha yabeka iBayfield njengeyona "Dolophu iNcinane iMbindi-ntshona." Kwaye sicinga ukuba kunjalo ngokwenene!
I love Bayfield, WI and Topanga, CA that's why I named my rental Bay Top Lake House, LLC. I love the draw of Lake Superior and the Santa Monica Mountains and feel both areas provid…
Ndiyafumaneka ukukunceda ngelixa uhlala eBay Top Lake House. Nceda unditsalele umnxeba okanye uthumele umyalezo kum (310) 722-6707. Sikwanaye nomntu okhathalelayo wasekuhlaleni onokudibana nawe kwipropati, ukuba kuyimfuneko.